Sangano iri raburitsa gwaro richikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze zviri mubumbiro remitemo yenyika kwete kunyomba vatongi vematare edzimnhosva vanenge vaita basa ravo zviri pamutemo.
Izvi zvinotevera mashoko egurukota rezvemitemo, VaZiyambi Ziyambi, ekushora pamwe nekupumha huroyi vatongi vatatu vedare repamusoro vakabuda nemutongo wekumanikidza vaive mukuru wevatongi vematare edzimhosva, VaLuke Malaba, kuenda pamudyandigere.
Rimwe gweta rinoshanda neSouthern Africa Litigation Center, Amai Tambudzai Gonese Manjonjo, vati sangano riri kushora zvakaitwa naVaZiyambi uye riri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze zviri mubumbiro remitemo yenyika.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kwe Africa, VaDewa Mavhinga, vatiwo zviri kuitika pamusoro pematare edzimhosva muZimbabwe zvinoita kuti matare ashaye chimiro chakanaka.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi raVaZiyambi pamashoko eSouthern Africa Litigation Center sezvo vanga vasingabatike panharembozha yavo.
Asi mutauriri weZanuPF mudunhu reJohannesburg, South Africa, VaKennedy Mandaza, vati hurumende inotungamirirwa nebato ravo inoremekedza kodzero dzevatongi vematare.
Nyaya yekumanikidzwa kwaVaMalaba kuenda kumudyandigere iri kupikiswa nehurumende mudarerepamusoro soro.
Munyori mubazi rezvemitemo, Amai Virginia Mabhiza, vakaudza Studio7 nezuro kuti vari kupikisa mutongo wakaitwa panyaya yaVaMalaba kunyange hazvo sehurumende vachiremekedza mutongo wakaitwa nedare repamusoro nemusi weMugovera.